Maxuu u xanuunsanayaa Kongo? Akhri oo fahmaan sababta dadka reer Kongo ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay u silcayaan: waxay leeyihiin Mobutu waxayna ku xadgudbeen kuwa kale ee Kongo "Waxyaabihii madaxweynihii hore ee Zairian waxaa lagu celin doonaa Congo, ayuu ku dhawaaqay Joseph Kabila"
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 12, 2020 02: 52 No Comments
Ku dhimatay masaafurin, waddanka Morocco, Sebtember 07, 1997, Mobutu wali waa mowduuc murugsan oo kicin kara milicsiga siyaasadeed iyo shaqada damiirka leh ee hogaamiyaasha Kongo ...	Akhri wax dheeraad ah
Burundi: Dowladda Burundi ayaa hadda ku dhawaaqday, Talaadada 9-ka Juun war-saxaafadeed, "Geerida lama filaanka ah" ee madaxweyne Pierre Nkurunziza, oo isbitaal la dhigay tan iyo Sabtidii kadib markii uu xanuunsaday.
Posted By: Admi1waa: Juun 9, 2020 13: 07 No Comments
Pierre Nkurunziza, oo xukunka hayey tan iyo 2005, wuxuu dhintay Isniintii si rasmi ah ka dib markii "qabashada wadnaha", ay ku dhawaaqday masuuliyiinta, kuwaas oo ku dhawaaqay baroordiiq qaran muddo toddobo maalmood ah. L ...	Akhri wax dheeraad ah
Coronavirus: Burundi waxay eryi doontaa kooxdii WHO ka dib markii Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) uu sheegay in 190 oo qof ay ku dhiman karaan Afrika sanadka ugu horreeya ee cudurka faafa ee coronavirus haddii la xakameeyo xakamaynta guul darrooyin muhiim ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 18, 2020 02: 28 No Comments
Burundi ma aysan qaadin wax talaabooyin ah oo xakameyn ah oo dhaqdhaqaaqa ah oo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus! Warqad aan la saxeexin oo ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay ...	Akhri wax dheeraad ah
Burundi: Golaha Isgaarsiinta Qaranka ayaa go’aansaday inuu joojiyo baahinta idaacadda BBC iyo La Voix de Amérique, labada raadiye ee caalamiga ah kuwaasoo barnaamijyada ku baahin jiray luqadda maxalliga ah, muddo lix bilood ah.
Posted By: Admi1waa: May 5, 2018 22: 03 No Comments
Burundi gudaheeda, inta ololaha aftida loogu dhawaaqayay si rasmi ah loo bilaabay iyada oo aan qoraalka la ogeyn, booska warbaahinta ayaa aad uga sii dareysa. Dal ay inbadan ...	Akhri wax dheeraad ah
Burundi waxay ku baraarujisaa gabdhaha yaryar si ay u soo dhaweeyeen amiirka garsoorka ee Beljamka sanad guuradii 50aad ee 2012
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 12, 2017 00: 01 No Comments
Ma this hab Burundi u mahad Belgiumka ayaa kala qaybiyey dadkii Banya Rwanda iyadoo la abuurayo fikradaha ah Hutu iyo Tutsi taas oo horseeday in musiibooyin aan ogaado? Xaggee ...	Akhri wax dheeraad ah